Abakhiqizi bama-Graphite Electrodes & Suppliers - Abasebenza E-China Graphite Electrodes Factory
Izingono zama-graphite electrodes zisetshenziselwa ukuxhuma ama-electrodes amabili noma ngaphezulu kwikholomu. Futhi inhloso yalokhu ukuthola ukusetshenziswa okuqhubekayo kwama-electrodes enqubweni yokwenza izinto kagesi ye-arc. Izingono, ezinendawo evamile yangaphandle yezintambo, ziyithuluzi elibalulekile lokulinganisa ukwelula ubude be-electrode. Ukwenza lokhu kugwema ukusetshenziswa okungakhiqizi ekuncibilikeni.
I-HP graphite electrode yenziwa ngenaliti coke ingeniswe ivela eJapan, e-USA, inqubo yokukhiqiza ye-graphite electrode iyakuchoboza, i-sieging, izithako, ukuxova, ukubumba, ukubhaka, ukufaka umfutho ophakeme kakhulu, ukubhula kwesibili, inqubo yokufaka imidwebo nokufaka imishini, izingono ye-graphite electrode ne-nipple kwenziwa ngokungabhalwa kathathu futhi kubhakwe kane, okokusebenza kwama-graphite electrode wokwenza insimbi kungeniswa ngenaliti kusuka eJapan nase-USA.
I-Graphite electrode iyithuluzi elenziswa kakhulu lokusetshenziswa elisetshenziswa embonini yokuncibilikisa kagesi, enezinto zokuphakama kukagesi okuphezulu, ukuhambisa okushisayo, amandla aphezulu emishini, i-oxidation nokumelana nokugqwala kokushisa okuphezulu. I-Graphite electrode isetshenziswa ngokujwayelekile e-EAF (ngensimbi yokunyibilikisa), isithando somlilo se-arc (ukukhiqiza i-Ferroalloy, i-silicon emsulwa, i-phosphor, i-matte, i-calcium carbide, njll. , ifenisha kagesi ekhiqiza i-carborundum, njll.